कास्कीमा २४ चैत्रमा टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियान सुरु हुने - केन्द्र खबर
कास्कीमा २४ चैत्रमा टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियान सुरु हुने
२०७८ चैत्र २२ १५:२७
अभियानको क्रममा टाइफाइड खोप स्थानीय तहको प्रत्यक विद्यालय र विद्यालय नभएको ठाउँमा वडामा खोप केन्द्रमा संचालन हुने छ ।
कास्कीमा चैत्र २४ गते अमरसिंह माविमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अभियानको सुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीले मंगलबार अभियान वारे जानकारी दिएको छ । २४ गते अभियानको सुरुवात भए पनि २५ गतेबाट खोप लागाउन थालिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
बालरोग विशेषज्ञ डा. रामचन्द्र वास्तोलाले खोप पूर्ण सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको बताए । उनले खोपमा अहिलेसम्म मेजर साइड इफेक्ट नदेखिएको र ढुक्क भएर खोप लागाउन आग्रह गरेका छन् ।
कास्कीमा खोपका लागि ५४८ केन्द्र संचालन हुने छन् । कडा ज्वरो आएका र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लागाएको १४ दिन नपुगेकाले यो खोप लागाउन नहुने वास्तोलाले बताए ।
नेपालमा टाइफाइडको प्रति एक लाखमा १० हजार ९६० संक्रमण दर रहेको छ ।
यो रोगको संक्रमण सबै उमेर समूहमा हुने भए पनि १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई बढी असर गर्ने डा. बास्तोलाले बताए । टाइफाइड खोपबाट संक्रमणमा कमि आउनुको साथै बाल मृत्यु दर न्युन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस पहिले बालिबालिकाले १२ प्रकारका खोप लगाउदै आएकोमा यो १३ औँ खोप हो ।
टाइफाइडविरुद्धको खोपको सुरुवात गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र हुने भएको छ । नेपालमा हाल दिन लागिएको खोप विश्व स्वस्थ्य संगठनले सिफारीस गरेको टाइफाइड कन्ज्युगेट भ्याक्सिन हो ।